Dablay hubaysan oo weerar ku qaaday suuqa sarifka ee magaalada karachi. - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Dablay hubaysan oo weerar ku qaaday suuqa sarifka ee magaalada karachi.
On Jun 29, 2020 994
Addis Ababa june 29,2020 (Senee 22,2012 T.I) (FBC/SOMALI)- Ugu yaraan sagaal qof ayaa la dilay iyadoo dabley hubeysan ay weerareen suuqa sarifka pakistaan ​​ee ku yaal magaalada dekedaha leh ee koonfurta Karachi Isniintan, sida ay booliska magaaladaasi sheegeen.
Dadka dhintay waxaa ku jira afartii qof oo weerarka soo qaaday, afar ilaaliye ah oo ka mid ah ilaalada Bakhaarada Pakistan iyo nin bilays ah, Muqaddas Haider, oo ah taliyaha bilayska magaalada, ayaa wariyeyaasha u sheegay. in ugu yaraan toddobo qof sidoo kale dhaawacmeen.
Bayaan gaar ah oo uu saxaafada la wadaagay, Ghulam Nab Memon, oo ah sarkaal kale oo sare oo booliis ah, waxa uu sheegay in rag aad u hubeysnaa ay gudaha u galeen dhismaha suuqa sarifka, isaga oo intaa raaciyay “hawlgal nadiifin” ayaa socda.
Abid Cali Xabiib, oo ah agaasimaha suuqa sarifka , ayaa sheegay in dableydu ay weerareen dhismaha oo ay u dhaqaaqeen si aan kala sooc lahayn rasaasna ay ku fureen dabaqa koowaad.
Booliis dheeraad ah iyo ciidamo millatari ah ayaa gaadhay goobta, waxayna xidheen dhismaha, sida ay sheegeen booliisku.